Shop In-charge Archives - Glory Assumption Space
၁) Shop Incharge – Male/Female - (5) Posts / လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) / တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ။
၁) Shop Incharge – Male/Female - (5) Posts / လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) / တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ • အရောင်းပိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍အနည်းဆုံးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၃ ) နှစ် နှင့်အထက်ရှိရမည် ။ • Computer သုံးနိုင်ရမည် ။ • Stock ပိုင်း နှင့် စာရင်းပိုင်း ကို ကျွမ်းကျင်စွာ ကိုင်နိုင်ရမည် ။ • Management ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည် ။ • အလုပ်ချိန်အဆိုင်းဖြင့် ဆင်းနိုင်ရမည် ။ • တစ်ပတ်တစ်ရက်ပိတ်သည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင်ရှိသော Fashion Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Shop In-charge (2) Posts Male
<<<<<<<<<<<<<<< “ URGENT POSITION ”>>>>>>>>>>>>>>>>> Yangon မြို့ တွင်း ရှိ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် အနီးတစ်ဝိုက်တွင်ရှိသော GAS Agent နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော Company ကြီးများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ဝန်ထမ်းများ အမြန် အလိုရှိနေပါသည်။ GAS က အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု တွေ နဲ့ မြန်မြန်သာလျှောက်ထားလိုက်ပါ Shop In-charge (2) Posts Male • Any Graduate • Must be above (30)years old. • Above (3) years experience in related fields. • May be good management skills. • Must be good relationship. • Must be good interpersonal skills and communication skills. • Can be patient and active. Email ဖြင့်၎င်း၊ လူကိုယ်တိုင် လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com Phone No.- 09 262223784, 09 977125251,09 262555438, 09 263121101 ရုံးလိပ်စာကတော့ တိုက်အမှတ်(၆) ၊ အခန်းနံပါတ် (၁၀၄)၊ အင်ကြင်းမြိုင်အိမ်ရာ ၊ ဗိုလ်ချို(၁)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့။